Wararka Warshadaha - Shenzhen Jos Technology Co., Ltd.
Guriga > Wararka > Wararka Warshadaha
Isticmaalka iyo adeegga guriga smartï¼ˆ2ï¼‰
Waxaan aqbalnaa in aan ku calaamadeyno summada macaamiisha dhammaan alaabadayada waxaanan ku dhameyn karnaa hal shey oo laga soo bilaabo fikradda macaamiisha ilaa badeecada ugu dambeysa oo diyaar u ah in la iibiyo.
Isticmaalka iyo adeegga guriga smart (1)
Waxaan soo saarnay in ka badan 1,00 nooc oo badeecooyin tayo leh, kuwaas oo diyaar u ah qaybo kala duwan oo dabooli kara baahiyaha gaarka ah ee kala duwan ee macaamiisha adduunka oo dhan.
Maxaad samayn kartaa haddii aad lumiso fogaanta albaabka garaashka
Shirkadeena waxay ku takhasustay naqshadaynta, horumarinta, soo saarista iyo suuqgeynta alaabada RF sida kuwa qaata wireless-ka iyo modules-ka gudbiyaha, kontaroolada fogaanta ee wireless-ka, nidaamka digniinta baabuurta, nidaamka digniinta guriga iyo agabyada la xidhiidha.
Shaqada badhanka ee fogaanta albaabka garaashka
Waxaan ku bixineynaa dhammaan dadaalladayada bixinta alaabada tayada leh iyo adeegga iibka ka dib ee ugu wanaagsan si aan ula jeedno markab-guul-guuleysi ganacsi oo lala yeesho dhammaan macaamiisheena.
Mabda'a shaqada ee fogaanta albaabka garaashka(2)
Annaga oo kaashanayna waaxdayada Farsamada, waxaanu macaamiisha siin doonaa dukumentiyada barnaamijyada ama fiidiyoowga, xallinta dhibaatooyinka ay la kulmaan macaamiisha habka isticmaalka
Mabda'a shaqada ee fogaanta garaashka albaabka (1)
Kooxdayada iibka xirfadeed ayaa xallin doona su'aalaha macaamiisha online 24 saacadood; Dhammaan alaabtayada waxaa la tijaabin doonaa laga bilaabo xilliga naqshadeynta ilaa shirka ugu dambeeya;